Indo -German Chamber of Commerce Inozivisa Nhengo Dzedare Dare
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Indo -German Chamber of Commerce Inozivisa Nhengo Dzedare Dare
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Indo-ChiGerman Chamber of Commerce
Indo -German Chamber of Commerce (IGCC) nhasi yazivisa kugadzwa kwaPuneet Chhatwal, Managing Director & Chief Executive Officer, Indian Hotels Company (IHCL), seMutungamiriri mutsva weChamber. Puneet Chhatwal, mutungamiri webhizinesi wepasirese ane ruzivo, anotora matomu kubva kuMutungamiri ari kubuda, Kersi Hilloo (Managing Director Fuchs Lubricants India).
IGCC yakagadzawo Mutevedzeri weMutungamiri uye Treasurer mutsva kukomiti yake.
Jerimani ndiye mutengesi mukuru weIndia muEU uye wechinomwe mukuru wevatengesi vedzimwe nyika muIndia.
IGCC ndiyo hombe yeGerman Bi-National Chamber (AHK) kunze kwenyika, uye Chamber hombe yeCommerce muIndia ine anopfuura makambani enhengo mazana mana nemazana mashanu mumatunhu akasiyana siyana.
IGCC vakazivisawo kudomwa kwenhengo dzekomiti yavo nyowani, Anupam Chaturvedi (Director & Chief Representative DZ BANK India) saVice President, naKaushik Shaparia (CEO Deutsche Bank India) sa Treasurer.
Achitaura pachiitiko ichi, Puneet Chhatwal, MD uye CEO, IHCL yakati: “Iropafadzo kusarudzwa seMutungamiriri, uye tinotarisira kuendesa mberi basa reGCC rekuita musimboti wekusimudzira hukama hwebhizinesi pakati India uye Germany. Munguva dzazvino, pane kudiwa kukuru kwekudyidzana kwepasirese, uye isu ticharamba tichitsigira makambani edu enhengo mukugadzira mikana yakawanda, kuwedzera kubatana uye kuendesa kukosha. ”
Achitaura nezvekugadzwa kutsva, Stefan Halusa, Director General, IGCC, vakati: "Tinogamuchira nhengo dzekomiti nyowani ku IGCC uye tinotarisira mupiro wavo unokosha. Tinotenda kuti VaChhatwal, pachinzvimbo chavo seMutungamiriri, vanounza ruzivo rwavo rwakakura maererano netsika nemagariro akasiyana ebhizinesi kuGerman neIndia. Jerimani ndiye mutengesi mukuru weIndia muEU uye wechinomwe mukuru wevatengesi vedzimwe nyika muIndia. "Izvi zvichatipa mukana wekutsvaga nzvimbo nyowani dzekukura kweupfumi tichishandisa simba renyika mbiri."
Puneet Chhatwal ane angangoita makumi mana emakore ruzivo rwepasirese. Parizvino anotungamira kambani hombe uye inonyanya kuzivikanwa yekugamuchira vaeni muSouth Asia, IHCL. Izvi zvisati zvaitika, akambobata chinzvimbo chehutungamiriri kuGerman, neEurope. Iye zvakare ari Mutungamiriri weIhotera Association yeIndia uye Sachigaro weCII National Committee ye Tourism.
IGCC inzvimbo inoremekedzwa kwazvo muIndia neGerman. Iyo ndiyo hombe yeGerman Bi-National Chamber (AHK) kunze kwenyika, uye Chamber hombe yeCommerce muIndia ine anopfuura makambani mazana mana nemazana mashanu emakambani enzvimbo dzakasiyana siyana. Around 4500 makambani eGerman anoshanda muIndia, achipa anopfuura mazana mashanu emabasa munyika.
Yakagadzwa mu1956, iyo Indo -German Chamber of Commerce (IGCC), isiri-purofiti sangano ine makore makumi matanhatu nemashanu ekupa simba kudyidzana nhasi iripo munzvimbo nhanhatu muIndia pamwe neumwe kuGerman. Iyo inopa akawanda masevhisi akadai seBusiness Partner Searches, Kambani Fomendi, Zano reMutemo, HR Kuhaya, Kushambadzira uye Kushambadzira, maFair Fairs, Ruzivo neRuzivo-Shanduko kuburikidza neMapepanhau, Kutumirwa uye Zviitiko, pamwe neKurovedza.